China nnukwu nnukwu gwongworo igwe gwakọtara ọnụ ụlọ ọrụ igwe nrụpụta snow tubes ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Ifuru
Ugwu tubing bụ ezigbo ihe ngwọta, zuru oke maka ndị okenye na ụmụaka maka obere slides. Tubing na-eme ka ihe dị nro na-ada ụda ma na-enye mmiri na-atọ ọchị mgbe ọ na-agbadata. Nke a bụ oké osimiri nke ọ joyụ na anụrị!
Nha 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 120cm
Ihe mkpuchi Ihe mkpuchi na ala PVC; Ihe mkpuchi mkpuchi na ala siri ike
Ihe tube dị n'ime Butyl
Agba Dị ka gị arịrịọ
Ojiji Childrenmụaka, ndị okenye na nwoke mara abụba
Ngwugwu Kpara akpa & katọn
◎ Products Details & Uru:
A na-ahazi tubụ mmiri anyị maka ihe ntụrụndụ kwa afọ maka ị na-agbada ugwu ma na-ese n'elu mmiri. Igwe roba na-adịgide adịgide na-adị mma nke ọma ma ị na-atụrụ ndụ na mmiri ma ọ bụ na-agbada ugwu ugwu snow kpuchiri. Ihe ị ga - eme bụ iwepu ọkpọkọ dị na igbe, kpoo ya na ikuku, ma hapụ ka ihe ọchị bido.
A na-eji akwa 600 denier polyester wuo ma ọ bụ kwalite naịlọn 1000 denier dị na snow, ma ihe a bụ ihe na-asọ oyi, na-eguzogide ọgwụ, na UV na-echebe
Nkwado ejiri na eriri-eriri sitere na polyester eriri siri ike na-arụ ọrụ dị ike nke dị ike na nchekwa.
Mgbe ị na-efe n’ugwu ahụ, ịchọrọ ihe ị ga-ejidesi ike. N'inwe aka dị oke ike nke buru ibu nke ọbụlagodi nke mittens kachasị ukwuu, ị ga-enwe nchebe ka ị na-agba ọsọ iji hụ onye ga-enweta nke kachasị.
Ala Rubber: tubes anyị snow ga-adịru afọ ya na ike ya siri ike na roba inflatable tube.Be n'ogologo ndụ ahụ, ala ala na-enye gị ọsọ ọsọ ọsọ.
Okpukpo ala PVC: kacha ewu ewu na Russia.
Enwere ike iji ya maka ịgba ọsọ na ịgba mmiri
Oké ọrụ tube maka snow, kwụsị ịzụ ọhụrụ snow tube n'ihi na ha dọwara ma ọ bụ na-a hole.Different si eke roba, butyl tube enweghị ike isi ísì ọjọọ, ọ bụ na-adịghị njọ ka ike.
A dịgasị iche iche nke agba ka ị họrọ.Anyị nwere ike ibipụta gị logo na mkpuchi
Ngwaahịa agafeela Chinese "CCC", American "DOT", European "EN71" na "PAHS", N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ agafeela Asambodo Asambodo Sistemụ "ISO9001", Asambodo Sistemụ Gburugburu Ebe obibi "ISO14001"
1.Q: you bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ otu ụlọ ọrụ ọkachamara na ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe na mbupụ na nrụpụta.
2.Q: OEM dị?
A: Ee, OEM dị, anyị nwere ike ịme dị ka akara gị, mbukota, ibu na ihe ndị ọzọ.
3.Q: Gịnị bụ nnyefe oge?
A: n'ime 15-30 ụbọchị mgbe nnata 30% nkwụnye ego.
4.Q: Kedu ihe ị ga-eme na ihe ndị agbajiri? Ga-akwụghachi ụgwọ ihe ndị ahụ na-emebi emebi?
Azịza: Anyị nwere usoro njikwa njikwa zuru oke .Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu ọ bụla (ma e wezụga mmerụ ngwa ngwa, acid na alkali corrosion na ikpughe UV), Biko were foto ma zigara anyị, onye injinia anyị ga-enyocha. bụ anyị igwefoto nsogbu, anyị ga-eme ka kwekọrọ ekwekọ ụgwọ.
5.Q: A nabatara ihe nlele nke ọma, ule gosipụtara nsonaazụ ọma, otu esi ekwe nkwa iwu niile otu ụdị?
A: Echegbula. Usoro iwu dị otu dị ka ihe atụ. N'ihi na ewepụtara ihe nlele site na imepụta nnukwu.
◎ Ozi kọntaktị
Shary ebe a, achoro m iwulite gi enyi na enyi ogologo oge. Mmadụ Bịa na-esonyere anyị, gị ọ bụla ase ga-zara n'ime 12 awa.
Ajuju obula, biko mee ka m mara n’onu, aga m anọ mgbe niile n’ebe ọrụ gị ^ _ ^
Mgbanwe Qingdao, ezigbo onye Mmekọ !!!
Kpọtụrụ: Shary Li
Ìgwè / WhatsApp: + 86-18205329398
Nke gara aga: 15inch Car Taya Inye tube 175 / 185R15
Osote: 44inch Hard Bottom Snow Tube With Naịlọn Cover
Ne tube N'ihi Snow ikuku mmiri Taya
Snow ikuku mmiri Taia tube
Snow ikuku mmiri taya na Tubes
Snow tube na ịkwanyere Cover
Uzo esi aga na họtelu Off the Road OTR Taia Inner Tube 23.5-25 26.5-2 ...
700x25C Butyl Rubber Bicycle Taya Ne tube F ...
Butyl Rubber Motorcycle Ne tube maka Motorcyc ...
Ugbo ugbo ala taya n'ime akpa 16.9-30